Banyere Anyị - Weifang U-Power Co., Ltd.
Weifang U-Power Co., Ltd. bụ onye na-ebubata ngwa ahịa, ọkachamara na n'ichepụta mmanụ diesel generator, nfuli diesel, mmanụ mmiri na-emepụta mmanụ dizel, mmanụ diesel na akụrụngwa ike ndị ọzọ. Anyị ike na nkà na ụzụ management, na-eju afọ ngwaahịa na magburu onwe sales otu ijere ahịa anyị.Our ụlọ ọrụ na-ekpuchi ebe ndị ihe 6,000 square mita. Anyị na-ewe ihe dị ka ndị ọrụ 500. Ha na-arụ ọrụ na mgbakọ akpaghị aka atọ na usoro nyocha abụọ dị elu. Site na ụlọ ọrụ akụrụngwa nke ọma na akụrụngwa teknụzụ bara ụba, ọtụtụ ngwaahịa anyị enwetawo ọdịiche mba site na Kọmitii Sayensị na Teknụzụ nke China.
N'ihi ọrụ zuru oke, nke a pụrụ ịdabere na ya na nke na-adịgide adịgide, yana ọnụ ahịa ezi uche dị na ya, ndị ahịa sitere n'akụkụ ụwa niile nwere ngwaahịa anyị. "All maka Ndị Ahịa anyị, All for Perfect" bụ anyị omenala na-emeso ọ bụla business.On ndabere nke ibe uru, anyị ji ezi obi na-atụ anya na-akwado ndị ahịa si n'ụwa nile. Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ.
Ihe karịrị afọ 20 na mbupụ ahụmahụ na Production mgbapụta set.
Mbugharị ngwa ngwa, oge nnyefe ọsọ ọsọ, nwalee ngwa ọrụ ọ bụla tupu ịnye ya.
Anyị nwere ike ịhazi ụzọ njem dị ka oke osimiri, site na DHL / FedEx, TNT.
Anyị na-anabata T / T, L / C, Western n'otu wdg ọtụtụ ugwo okwu.